ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ငါမဆိုင်စိတ် မွေးသင့်သလား”
ဟုတ်ကဲ့ ကိုပေါ ။ ငါမဆိုင်စိတ် မွေးနေကြတာ တယ်ခက်တာပဲကိုး ။
""" လူတို့သည် ပြဿနာတရပ်ကို ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းဘို့ မကြိုးစားဘဲ ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတည်းဟူသော “ငါမဆိုင်စိတ်”ကိုဘဲ မွေးနေကြမည်ဆိုလျှင် ထိုပြဿနာမှာ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီး နောက်ဆုံးတွင် အားလုံးအကျိုးစီးပွားကို ပြန်လည်ထိခိုက်စေသည်သာဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်စဉ်းစားလျှင် မြန်မာပြည်တွင် ယခု ဆိုးရွားလှသော စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကြီးစိုးမင်းမူနေသည်မှာ လူအများက “ငါမဆိုင်စိတ်” မွေးနေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အားလုံးကသာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့် ကိစ္စမှန်သမျှကို မတွက်ကပ်၊ မခိုကပ်ဘဲ ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြမည်ဆိုပါက သာယာဝပြောသော လူ့ဘောင်ကို ရရှိမည်မှာ မလွဲမသွေပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ """
ကိုပေါရေးထားတာ တကယ်ကို ထိထိမိမိရှိပါတယ်။
"သူတော်ကောင်း ၀င်လုပ်ချင်သော စရိုက် " ၊“ငါမဆိုင်စိတ်” စတဲ့ တိုတိုလေးနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထိမိတဲ့ ကိုပေါစကားလုံးတွေက postတွေသာဟောင်းသွားပေမယ့် ရင်ထဲစွဲလို့အမြဲသစ်နေဆဲ။ အဓိကကျတဲ့ တန်ဖိုးအရမ်းရှိတဲ့အဲဒီလိုစိတ်ဓါတ်ပြုပြင်ရေးpostတွေ များများဖန်တီးနိုင်ပါစေ။
ကိုယ်.၇ဲ. ၇ပိုင်ခွင်.နဲ. ကိုယ်.၇ဲ.တာဝန် ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတာ၇ယ်။။
ယနေ.အချိန်ထိ နအဖ ဆက်ဆိုးေ၇ှနေတာ မျက်မြင်ဘဲ။
အဲဒီလိုဖြစ်နေအောင်လဲ နအဖ က စနစ်တကြဖျက်ဆီး ခဲ ကြတယ်။။
ကျူပ်တို.ခေတ်မှ တာဝန် မကြေခဲ.ကြ၇င်….နောက်မျိူးဆက် အတွက်၇င်လေးစ၇ာဘဲဗျို.။။။
တစ်ဦးနဲ့ငါမဆိုင်စိတ်အကြောင်း
ဆွေးနွေးဘူးတယ်....သူကတော့ ဒီစိတ်တွေပျောက်အောင် ၁/၂နှစ်အရွယ်ခလေးတွေဘဲချန်ပြီး....တစ်နိုင်ငံလုံး..သတ်ပစ်မှရမယ်လို့ 
ကိုပေါ စာတွေအများကြီး ရေးနိုင်ပါစေဗျာ..။